शिक्षा क्षेत्रको सुधार उपमहानगरको प्राथमिकतामा : नगर प्रमुख डा. पौडेल – Nijgadh News
Home / स्थानिय समाचार / शिक्षा क्षेत्रको सुधार उपमहानगरको प्राथमिकतामा : नगर प्रमुख डा. पौडेल
शिक्षा क्षेत्रको सुधार उपमहानगरको प्राथमिकतामा : नगर प्रमुख डा. पौडेल
Nijgadh News November 22, 2017	स्थानिय समाचार Leaveacomment 30 Views
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले उपमहानगरभित्रको शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
औराहास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयद्वारा आयोजित स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख डा. पौडेलले सामुदायिक शिक्षामा राज्य र उपमहानगरको ठुलो लगानी भएपनि सोचेजस्तो प्रतिफल नदेखिएकाले सुधारको जरुरी रहेको बताए ।
विकास निर्माणका योजनाहरुको कार्यान्वयनसंगै शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा सुधारका लागि उपमहानगर अघि बढिसकेको भन्दै नगर प्रमुख डा. पौडेलले उपमहानगरबासीले अनुभुती हुने गरी परिवर्तन गरिने बताए । डा. पौडेलले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको कार्ययोजना ल्याउन सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरयुक्त बनाउन जरुरी रहेको बताउदै डा. पौडेलले प्राविधिक तथा स्वरोजगारमूलक शिक्षामा उपमहानगरले काम गर्न खोजिरहेको बताए । कार्यक्रममा नगर प्रमुख डा. पौडेल, संंस्थाकी पूर्वशिक्षिका एवम् नगर उपप्रमुख सरस्वती चौधरीलाई सम्मान गरिएको थियो । सोही अवसरमा विद्यालयले सेवानिवृत शिक्षक केशव पौडेललाई सम्मान गर्दै बिदाई गरेको थियो । विद्यालयका अध्यक्ष श्याम भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक धनप्रसाद बजगाईले गरेका थिए ।
Previous उकालो छिचोल्दै मेयर डा. पौडेल पुगे दुर्गम वस्तीमा
Next रेडियो सिमरा ९१.२ मेगाहर्जको ९ औं वार्षिक उत्सवमा जे देखियो